4.6.20 MCS COVID-19 Vaovao – Mason City sekoly COVID-19 foibe
4.6.20 MCS COVID-19 Vaovao
Te hanao fotoana fohy izahay ary hamantatra hoe manao ahoana ny fanamby amin'ity hetsika COVID-19 ity dieny izao. Betsaka ny tsy fantatra, ary isan'andro dia mitondra fampahalalana vaovao.
Watch ity video ity amin'ireo mpiasa sy fianakavianay mizara izany na dia mety tsy miaraka ara-batana aza izahay, mbola miaraka amin'izany isika. Ary mbola Mason ihany isika.
Toy ny androany amin'ny 2 ora tolakandro, tsy misy tranga voamarina momba ny COVID-19 ao amin'ny Sekolin'ny tanànan'i Mason, ary 4,450 raharaha voamarina tany Ohio. Ity ambany ity ny valin'ny fanontaniana iraisan'ny fianakaviantsika sy ny vahoaka.
Novakiako ny momba ny zavatra sasany momba ny sehatra an-tserasera toa ny Zoom. Ahoana ny fomba iarovan'i Mason ny mpianatra mandritra ny Internet?
Mason City Schools dia mihevitra ny fiarovana sy ny tsiambaratelo ho an'ny mpiasa sy ny mpianatra. tato ho ato, fivoriana Zoom marobe no voaroba noho ny atiny tsy mendrika. Nisafidy ny tsy hampiasa ny Zoom amin'ny mpianatray izahay. Afaka manolotra fotoana hifandraisana amin'ny alàlan'ny antso an-tsary mivantana ireo mpampianatra (ohatra, amin'ny alàlan'ny Google Meet) fa tsy hotakina izy ireo. Azon'ny mpampianatra atao koa ny mampiasa teknolojia miorina amin'ny horonantsary tsy mifanaraka, toy ny FlipGrid sy SeeSaw, hifandraisana amin'ireo mpianatra. Mampiasa ny Google isan'andro ny mpiasa sy ny mpianatray, ary mandritra io vanim-potoana io dia miankina amina fitaovana sy rindrambaiko efa niasa matetika mifanohitra amin'ny fampidirana fitaovana vaovao izahay. Fantatray fa tsy misy fitaovana tonga lafatra amin'ny kaonferansa video, ary amin'ny olon-dehibe dia manana safidintsika mafy isika.
Ahoana no fomba hiarovan'ny ray aman-dreny ny zanany amin'ny Internet?
Ny departemantan'ny rafitra vaovao dia namolavola fampianarana ray aman-dreny amin'ny Internet mba hiarovana ny zanakao amin'ny Internet. Ahitana paikady hitazomana ny zanakao ho azo antoka ny fampianarana raha toa ka mifandray amin'ny Internet izy ireo, mizara ny safidin'ny fitaovana misy hametrahana fetra voafetra sy hisorohana ireo tranonkala manokana, ary manolotra safidy rindrambaiko hiarovana ny zanakao.
Noheveriko fa tsy nianatra izahay ny zoma ho an'ny Andron'ny fianarana manokana. Inona no mitranga ankehitriny?
Satria efa somary nisy fanakorontanana kely izahay ary herinandro teo ho eo ny Andro Fianarana manokana sy mialoha ny fiatoan'ny lohataona raha nifindra tany amin'ny Fianarana lavitra izahay, Izahay dia nanapa-kevitra fa tsara ho an'ny mpiasa sy ny fianakaviana ny tsy fananan'ny mpianatra andro iray manadino ny sasany amin'ireo fanaony vaovao. Voalaza izay, ny drafitra iainanay momba ny lavitra dia ny fianarana tsy mifanaraka, ary tsy mitaky ny mpianatra hamita ny asa nampanaovina azy amin'ny andro na fotoana manokana. Raha mila manovaova bebe kokoa ny fianakavianao, mba manantona mpampianatra ny zanakao azafady(S).
Manamboatra sarontava ho an'ny mpiasa MCS: Manoro hevitra ny Amerikanina izao ny CDC mba hanao lamba volon-doha na saron-tava lamba rehefa avy mivoaka hanampy hanampy amin'ny fifehezana ny fihanaky ny coronavirus vaovao.. Raha olona fetsy ianao ary vonona hanampy amin'ny fanaovana sarontava lamba ho an'ny mpiasan'ny Mason City Schools, Tianay ny mandray azy ireo! Ianaro ny fomba fanaovana sarontava eto.
Misaotra anao amin'ny zavatra rehetra ataonao mba hanohanana ny Comets anay!